युरोप एक अविश्वसनीय महादेश हो अन्वेषण! हेर्न त धेरै संग, के र पत्ता लगाउन, यो अनन्त योजना सही स्थानको, युरोप रेल द्वारा अनुभव.
रेल अर्को युरोप अनुभव बन्द सुरु गर्नुपर्छ लन्डन! यो भने कि “लन्डनमा खराब दिन अझै कहिँ पनि राम्रो दिन भन्दा राम्रो छ।” त्यसैले, का त्यहाँ सुरु गरौँ! पूर्ण अवश्य छ Harry Potter यात्रा वार्नर Bros को. स्टुडियो तपाईं एक सुपर-प्रशंसक छैनन् भने पनि. को प्रविधि, मोडेल र पछि-द-दृष्य बस अचम्मको र राम्रो देखेर लायक. यो spellbinding मा6घण्टा यात्रा, यस्तो प्लेटफर्म रूपमा मूल सेट हेर9¾ र Diagon गली; को Hogwarts एक्सप्रेस बाफ रेल हेर्न; कास्ट जस्तै broomstick सवारी, र स्क्रिनमा wizardry चलचित्रहरू 'को पछि-द-दृश्य रहस्य लेगी. यो Harry Potter स्टूडियो लन्डन भ्रमण दुईतर्फी कोच समावेश परिवहन र प्रवेश टिकट बारेमा वार्नर Bros को लन्डन Harry Potter यात्रा थप पढ्नुहोस्. प्रवेश संग स्टूडियो यहाँ.
पेरिस: हो भन्छन्’ एक कलाकार आफ्नो पोर्ट्रेट पेन्ट गर्न
तपाईंको पछि रेल यात्रा पेरिस बाट, ट्रेन आफ्नो अर्को युरोप अनुभवहरू बार्सिलोना हुनुपर्छ. अब, हामी सुरू अघि गरौं गरेको यो सामान्यतः mispronounced शहर कसरी भन्न अभ्यास. धेरै अंग्रेजी वक्ता ध्वनि प्रयास ‘थप स्पेनिश‘ को 'ग pronouncing द्वारा’ मा बार्सिलोना एक 'औं रूपमा’ र भन्दै 'बार-द-लोना'. तर कातालान मा (केटालोनिआ भाषामा, जहाँ बार्सिलोना भेटियो), को 'ग’ एक को रूपमा उच्चारण गरिन्छ’ – त्यसैले 'बार-अप क्यानभास’ सही उच्चारण छ.
हामी बाहिर बाटो भनेर अब, गरेको Montjuïc पहाड कुरा गरौं. यो एउटा पत्तेदार टहलने लागि सही ठाउँ छ सुन्दर दृश्य. तपाईं आफ्नो पैदल भयो निश्चित (वा यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने चलिरहेको) मा जूता, यसलाई त्यहाँ माथि प्राप्त गर्न legwork एक बिट लिन गर्छ रूपमा, तर यो यो हो मतलब कम अन्य पर्यटकहरु द्वारा भीड. ठेस प्राकृतिक सेरोफेरो र शानदार दृश्य देखि, तपाईं देखि भवनहरु पाउनुहुन्छ 1992 ओलम्पिक खेल, सहित पलाउ संत JORDI र स्यान्टियागो Calatrava द्वारा डिजाइन दूरसंचार टावर.
इस्तानबुल ब्लू मस्जिद लागि प्रसिद्ध छ. हामी यो सिफारिस, जबकि, हामी तपाइँको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छौं इस्तानबुल रेलमार्फत युरोपको अनुभवको किनारमा छ, युरोप भन्दा एशिया यसको नजिक रूपमा.
जाऊ त्यहाँ SaveATrain.com तपाईंको अर्को ट्रेन साहसिक मा बुक गर्न3मिनेट, मा सस्ता रेल टिकट दर.